Kensington Combination Laptop Lock: သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "အအေးခံပြားများ" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
More "ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ" from Kensington
ကုန်ပစ္စည်းKensington Combination Laptop Lockအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
The portable Kensington Combination Laptop Lock allows you to protect your laptop and personal information. Its push-button design offers one-handed operation, while the Kensington T-bar secures the lock to your laptop. A keyless 4-wheel combination is easy to reset and offers 10,000 possible combinations. Just anchor the lock toadesk, table or fixed structure and you are secured.Anchors to desk, table or any fixed structureAttaches to laptop via the Kensington Security Slot found in many computersChoose from 10,000 possible combinationsKeyless 4-wheel combination is easy to resetPush-button design for easy, one-handed operationSuperior-strength lockhead to resist tamperingOne year warranty
သင်၏ Laptops များကို ပျက်ဆီး ပျောက်ရှခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် Kensington မှ Combination Laptop Lock ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ နံပါတ်သော့ဖြစ်သည့်အတွက် လက်တစ်ဖက်တည်းနှင့်သာ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပြီး သော့ပျောက်ဆုံးမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပေ။ အသုံးပြုသည့် သော့နံပါတ်မှာ နံပါတ်လေးလုံးဖြစ်သည့်အတွက် အလွယ်တကူ ဖွင့်ရန်မလွယ်ကူလှပေ။ ထို့ကြောင့် သင်၏ Laptop များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Combination Laptop Locak မှာ အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အချက်အလက်များKensington Combination Laptop Lock
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ Kensington Combination Laptop Lock